Dowladda Puntland oo Amar adag dul dhigtay koox diimeedka Saadicuun Bil xaq | SAHAN ONLINE
Dowladda Puntland oo Amar adag dul dhigtay koox diimeedka Saadicuun Bil xaq
GAROOWE – Shirkii gollaha Xukuumadda Puntland ee shalay ka dhacay Garoowe ayaa amar culculus la dul dhigay koox diimeedka cusub ee la magac baxday Al-Saadicuun bil xaq.
Shirka gollaha xukuumadda ayaa waxaa shir guddoominayey Madaxweyne kuxigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar,waxaana looga hadlay arrimo badan oo ay kamid yihiin amniga,abaaraha,dakhliga dowladda,xeerka tacliinta sare iyo caafimaadka.
War murtiyeed kasoo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in dowladda Puntland ay amniga guud ee Puntland ku sameyn doonto dib u qiimeyn dhinac walba ah gaar ahaana howlgallada magaalooyinka waaweyn ee Puntland.
Gollahu waxa ay soo saareen amar cusub oo wax looga qabanayo koox diimeedka cusub ee Al-saadicuun bil xaq taasoo golluhu ku tilmaamay koox baadiyeysan oo Takfiir ah.
Goluhu wuxuu faray laamaha amniga in si buuxda loo diiwaan geliyo goobaha ay uga sugan yihiin Puntland, ka dibna gacanta lagu dhigo meelaha xarumaha u ah ururkaas, Lagana cayriyo shaqada xubin kasta oo lagu ogaado inuu ka tirsan yahay Koox-diimeedkaas” ayaa lagu yiri War-murtiyeedka gollaha Xukuumadda Puntland.
Waxa ay sheegeen in kooxdan ay khatar ku tahay diinta Islaamka,caqiidada amniga dadka iyo dalka ,waxayna amar ku bixiyeen in lasoo tirakoobo oo la diiwaangeliyo xarumaha ay ku shaqeeyaan ama gacanta ku hayaan.
Kooxdan oo bishan laga dhawaaqay dhammaan gobolada dalka ayaa isla todobaadkan waxaa amar lagu xaaraantinimaynayo jiritaankooda soo saaray dowladda Federaalka iyadoona magaalooyinka waaweyn ee Puntland lagu qabtay Nadwooyin looga hadlayo khatarta caqiido ee kooxdan.